1 Samueri 28:1-25
28 Zvino mumazuva iwayo vaFiristiya vakatanga kuunganidza mapoka avo kuti uto racho rirwise vaIsraeri.+ Naizvozvo Akishi akati kuna Dhavhidhi: “Chokwadi unoziva kuti unofanira kuenda neni mumusasa, iwe nevarume vako.”+ 2 Dhavhidhi akati kuna Akishi: “Imi ndimi munoziva zvinofanira kuitwa nomushandi wenyu.” Naizvozvo Akishi akati kuna Dhavhidhi: “Ndokusaka ndichakuita mutarisiri womusoro wangu nguva dzose.”+ 3 Zvino Samueri akanga afa, uye vaIsraeri vose vakanga vamuchema, vakamuviga muRama, muguta rake.+ Asi Sauro, akanga abvisa masvikiro nevafemberi munyika.+ 4 Naizvozvo vaFiristiya vakaungana, vakaenda, vakadzika musasa muShunemi.+ Sauro akaunganidza vaIsraeri vose, vakadzika musasa muGiribhoa.+ 5 Sauro paakaona musasa wevaFiristiya, akatya uye mwoyo wake wakatanga kudedera kwazvo.+ 6 Kunyange zvazvo Sauro aibvunza Jehovha,+ Jehovha haana kumbomupindura,+ nokurota+ kana kuti neUrimu+ kana kuti nevaprofita.+ 7 Sauro akazoti kuvashandi vake: “Nditsvakirei mukadzi anosvikirwa,+ uye ndichaenda kwaari ndomubvunza.” Vashandi vake vakabva vati kwaari: “Tarirai! Pane mukadzi anosvikirwa ari muEndori.”+ 8 Naizvozvo Sauro akaita kuti arege kuzivikanwa,+ akapfeka dzimwe nguo, akaenda, iye nevarume vaviri vaaiva navo; uye vakasvika kumukadzi wacho usiku.+ Zvino akati: “Ndapota, ndishoperere+ nokusvikirwa, undibudisire munhu wandichakuudza.” 9 Zvisinei, mukadzi wacho akati kwaari: “Tarira iwe unonyatsoziva zvakaitwa naSauro, kuparadza kwaakaita masvikiro nevafemberi munyika.+ Saka, uri kuitirei somunhu anoteya mweya wangu kuti ndiurayiwe?”+ 10 Sauro akabva amupikira naJehovha, achiti: “NaJehovha mupenyu,+ mhosva yokukanganisa haizokuwiri panyaya iyi!” 11 Mukadzi wacho akabva ati: “Ndikubudisire ani?” Iye akati: “Ndibudisire Samueri.”+ 12 Mukadzi wacho paakaona “Samueri”+ akatanga kuchema nenzwi guru; uye mukadzi wacho akati kuna Sauro: “Mandinyengedzerei, imi murimi Sauro?” 13 Asi mambo akati kwaari: “Usatya, asi waonei?” Mukadzi wacho akati kuna Sauro: “Ndaona mwari+ achibuda panyika.” 14 Akabva ati kwaari: “Akaita sei?” iye achibva ati: “Mukweguru ari kubuda, uye akapfeka jasi risina maoko.”+ Sauro akabva aziva kuti akanga ari “Samueri,”+ uye akakotama chiso chake chakatarira pasi, akagwadama. 15 “Samueri” akatanga kuti kuna Sauro: “Wandinetserei nokuita kuti ndibudiswe?”+ Sauro akati: “Ndiri kutambudzika kwazvo,+ vaFiristiya zvavari kundirwisa, uye Mwari abva+ kwandiri, haasi kundipindura, nevaprofita kana nokurota;+ zvokuti ndiri kukushevedzai kuti mundiudze zvandinofanira kuita.”+ 16 Zvino “Samueri” akati: “Saka, uri kundibvunzirei kana Jehovha abva kwauri+ uye ava mhandu yako?+ 17 Jehovha achaita sezvaakataura achindishandisa, uye Jehovha achabvarura umambo kubva muruoko rwako+ ohupa Dhavhidhi,+ munhu wokwako. 18 Zvausina kuteerera inzwi raJehovha,+ ukasaratidza Amareki kutsamwa kwake kukuru,+ Jehovha achakuitira chinhu ichi nhasi. 19 Jehovha achaisawo iwe nevaIsraeri muruoko rwevaFiristiya,+ uye mangwana iwe+ nevanakomana vako+ muchava neni. Jehovha achaisa kunyange musasa wevaIsraeri muruoko rwevaFiristiya.”+ 20 Sauro akabva awira pasi, akazvambarara, akatya mashoko a“Samueri” kwazvo. Uyewo, akanga asisina simba, nokuti akanga asina kudya zvokudya zuva rose nousiku hwose. 21 Zvino mukadzi wacho akaenda paiva naSauro, akaona kuti akanga anetseka kwazvo. Naizvozvo akati kwaari: “Tarirai mushandikadzi wenyu ateerera inzwi renyu, uye ndaisa mweya wangu pangozi+ ndikateerera mashoko amandiudza. 22 Zvino ndapota, imiwo, teererai inzwi romushandikadzi wenyu; regai ndikuisirei chimedu chechingwa, mudye, kuti muve nesimba, zvamuchaenda.” 23 Asi iye akaramba, akati: “Handisi kuzodya.” Zvisinei, vashandi vake nomukadzi wachowo vakaramba vachimumanikidza. Akazoteerera inzwi ravo, akasimuka pasi, akagara pachigaro. 24 Zvino mukadzi wacho akanga aine mhuru yakakodzwa+ mumba. Naizvozvo akakurumidza kuibayira,+ akatora furawa, akakanya mukanyiwa, akabika makeke asina kuviriswa. 25 Akabva azvipa Sauro nevashandi vake, vakadya. Pashure paizvozvo vakasimuka, vakaenda usiku ihwohwo.+